के प्रियंका गान्धीको ‘जादु’ चल्ला? - Dainik Nepal
के प्रियंका गान्धीको ‘जादु’ चल्ला?
दैनिक नेपाल २०७६ जेठ १ गते ११:३९
काठमाडौं, १ जेठ । बुधवार प्रियंका गान्धीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘इलाका’ अर्थात उनको निर्वाचन क्षेत्र बनारसमा र्‍याली गर्दैछिन्।
“प्रधानमन्त्री महत्त्वपूर्ण मुद्दाका बारे बोल्दैनन्। अपूरा वाचाबाट ध्यान अन्यत्र मोड्ने उनको प्रयास छ।”
पछिल्ला वर्षमा जब जब कंग्रेसले निर्वाचनमा हार बेहोर्‍यो तब तब उनले बढ्ता भूमिका बहन गर्नुपर्ने आवाज उठे। सन् २०१५ मा केही कंग्रेस कार्यकर्ताले दिल्लीस्थित पार्टी मुख्यालय बाहिर ‘प्रियंका ल्याउ, कंग्रेस बचाउ’ जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरे।
“प्रजातन्त्र, संविधान र हाम्रा संस्थाहरू आक्रमणमा परेका छन् र यस्तो बेला राजनीतिमा नहोमिनु भनेको कायरता हुने थियो।
“प्रधानमन्त्री मोदी सहित भाजपा नेताहरू विचलित भएका छन्। नत्रभने उनीहरूले प्रियंकाको नाम बारम्बार किन लिइरहन्छन् र किन उनले केही प्रभाव पार्न सक्दिनन् भनिरहन्छन्?”
“निश्चय नै,” सिंह भन्छन्, “जब मतगणना हुन्छ तब तपाईँले देख्नुहुनेछ कसरी हाम्रो मत प्रतिशत बढ्नेछ भनेर।”
“राज्यमा पार्टीको सङ्गठन तहसनहस जस्तो स्थितिमा छ। शून्यदेखि पार्टी निर्माण गर्नुपर्नेछ। उनीसँग जादुको छडी छैन।”
तर एउटा कुराको बारेमा भने चौधरी ढुक्क सुनिइन्, “उनी राजनीतिमा निरन्तर रहनका लागि नै आएकी हुन्।” -बीबीसीबाट